NISA oo sheegtay iney gacanta ku dhigtay laba Shabaab ah oo dil damacsanaa. – XAMAR POST
Hay’ada Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliyeed ee NISA, ayaa sheegtay iney gacanta ku soo dhigtay laba xubnood oo ay ku sheegtay iney ka tirsan yihiin Al-Shabaab, waxeyna soo bandhigtay hub ay wateen raggan.
“Hawgal ay Hay’adaha Amnigu kafuliyeen banaanka Muqdisho, waxay gacanta kusoo soo dhigeen laba dhagarqabe oo katirsan AS iyo hubkooda, iyagoo maleegayey dilal lagu beegsanayo shacabka. Waxaana qayb ka ahaa labo kale, oo shaqaale ka ah shirkad ganacsi” ayaa lagu yiri qoraalka NISA.
Puntland oo Kheyre ku edeyay in uu qalalaaso ka abuurayo Gaalkacyo